Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee SanDiego, oo Cambaareeyey Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Jun 15, 2011 Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee SanDiego oo Cambaareeyey Kooxda Jwxoshiil
Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee degan SanDiego [UDSE], oo aad uga cadhaysan falk dambiyeedkii gumaadka ahaa ee ka dhacay tuulada Ceel-xaar bishan June 9, 2011, waxay nacalad dusha kaga tuureen budhcada Jwxo-shiil, oo iyagu fuliyey falkaas.
Tuulada Ceel-xaar, oo ka tirsan gabalka Qoraxeey, una jirta masaafa gaaban magaalada Qabridahare, ayey dhawaan kooxda Jwxo-shiil, ku dishay dad shacab ah oo tiradoodu dhan tahay 15 ruux. Laba ka mid ah dhaawacii 21 ahaa ee la geeyey Isbitaalka magaalada Qabridahre ayaa tirada dhimashada ka dhigaya 17 ruux.
Sida uu sheegay ururka UDSE, dadka la laayey ayaa dhamaantood shacab ahaa, kuwaas oo aan wax dambi ah cidna ka galin. UDSE, ayaa xanuun badan ka muujinaysa in la dilo dad shacab ah aan hubaysnayn, cidii dishaana ay dambiile tahay. UDSE, waxay qoraalkan ku tidhi “fulinta dambiyada noocan oo kale ah cidna guul uma ah, laakiin waa dambi ay si ula kac ah u gasho marar badan kooxda Jwxo-shiil.”
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa xasuuq joogta ka gaysata gabalada Degaanka Somalida Ethiopia, kan ugu dambeeyey ee ka dhacay Ceel-xaar, ayaana ugu xanuun badan sababta oo ah; wuu ugu dambeeyey, tirada dhimashada shacabka oo badan iyo sabab la,aanta.
UDSE, waxaanu aad uga xunahay in xubnaha kooxda Jwxo-shiil, ee xasuuqay shacabka Ceel-xaar iyo shacab kale oo badan ay joogaan dalalka reer galbeedka, kuwaas oo dadka ku nool dalalka reer galbeedka ee eheladooda ay dilaan ayna waxba ka waydiin arimahaas.
Waxaanu ka cosanaynaa dawlada degaanka Somalida Ethiopia in ay ka ilaaliso shacabka budhcada kooxda Jwxo-shiil, ee xasuuqa u gaysata shacabka.
Waxaanu tacsi u diraynaa dhamaan Ehelada dadkii la dilay, isla markaana waxaanu Eebe way uga baryeynaa in uu Janadii geeyo dadka dhintay.
Dadka dhaawac ahna, waxaan Eebe wayne uga tuugaynaa in uu bogsiiyo.
Kulan Cilmiyeedkii Kowaad ee Culimada Diinta Islaamka Uga Socday Magaalada Jigjiga oo Xidhmay, Bayaana ka Soo Baxay